Akaụntụ Health Check -
Dị ka ahụ mmadụ chọrọ nyocha ahụike oge niile ka ọ too ma zụlite ma bie ogologo ndụ, akaụntụ azụmahịa chọkwara nlebara anya 'ahụike' ya oge niile. Dika ebumnuche kachasị nke azụmaahịa ọ bụla bụ itolite ma nwee ọganiihu site n'ọganihu na-aga n'ihu na ire ahịa, ọ dị ezigbo mkpa inwe uto a na-enweghị nkwụsịtụ ma ọ bụ ihe mgbochi ọ bụla. Ezi ahụike na akaụntụ ndị na-ere ahịa dị ka ezigbo ọrịre. Agbanyeghị, idebe usoro dị iche iche nke ahụike akaụntụ ahịa nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ. Nke a na - abụ ihe gbagwojuru anya n'ihi oke ahịa nke azụmaahịa ọnlaịnụ. Inwe nkwado iji duzie ma nyere gị aka ịnọgide na-enwe nguzozi n'etiti oke iwu na-ezughị oke, ụgwọ mbubata mbubreyo, na ọnụego ịkagbu ya na inweta ezigbo ire ere nwere ike ịbụ nnukwu mmụba na azụmaahịa ahụ ma ga - egbochi ogologo oge ịkwụsị akaụntụ.
Ndị otu anyị na - enyere gị aka ịdebe ahụike nke akaụntụ Amazon gị ma nye gị ndụmọdụ ka ị debe usoro ziri ezi nke usoro ndị a:
Ntụziaka ịbelata ntụpọ
Ndị ahịa na-abịaru nso
Ijikwa tupu emezu kagbuo
Nyocha ahụike na akaụntụ ọ bụghị nanị na-eme ka uto nke ụlọ ọrụ ahụ guzosie ike, ọ na-enyere aka ịkwado mmekọrịta dị mma na ndị ahịa. Ndị otu APlus Global gbalịsiri ike ime ka azụmahịa e-commerce dị ka nke ọma maka mmadụ niile.